ကုန်သွယ်မှု ဖြစ်စဉ်ဆိုတာဘာလဲ? What is Trade Transaction? | Super Light Logistics
ကုန်သွယ်မှု ဖြစ်စဉ်ဆိုတာဘာလဲ? What is Trade Transaction?
ကုန်သွယ်မှု (Trade Transaction) ဆိုသည်မှာ ရောင်းသူနှင့် ဝယ်သူ လူပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးအကြား (သို့) ကုမ္ပဏီ ၊အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုအကြား ရောင်းချခြင်း နှင့် ဝယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ကို ခေါ်ဆိုသည်။ ထိုသို့သော ကုန်သွယ်မှုဖြစ်စဉ်များသည် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှ ဝယ်ယူရန် ဆန္ဒရှိပြီး အခြားအဖွဲ့မှလည်း ရောင်းချရန် ဆန္ဒရှိသည့်အခါမှသာ ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ရောင်းသူ ၊ ဝယ်သူ အဖွဲ့များသည် ကုန်သွယ်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ရပ် ထမြောက်အောင်မြင်ရေးအတွက် အဆင့်ဆင့်သော လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်သည်။
ကုန်သွယ်မှုဖြစ်စဉ်မှ လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်များ (Steps in Trade Transactions)
ကုန်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း (သို့) ရောင်းချခြင်းဖြစ်စဉ်တစ်ရပ်တွင် အဆင့်တော်တော်များများ ပါဝင်လျက်ရှိသည်။ ကုန်သည်တိုင်းသည် ကုန်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း (သို့) ရောင်းချခြင်းမပြုမီ ကုန်သွယ်မှုဖြစ်စဉ် တစ်ရပ်အကောင်းဆုံးရလာဒ်များ ရရှိနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်မည့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအားလုံးကို ဆောင်ရွက်ကြမြဲဖြစ်သည်။
ကုန်သွယ်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ရပ်တွင် ဆောင်ရွက်မြဲလုပ်နည်းလုပ်ဟန်များမှာ ဝယ်ယူမည့်သူဖက်မှ မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းဖြင့် အစပျိုးပြီး ဝယ်သူမှ ကျသင့်တန်ဖိုးပေးချေမှုဖြင့် အဆုံးသတ်မည်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါ အစနှင့်အဆုံး အဆင့်နှစ်ခုအကြား အခြားအဆင့်များစွာရှိနေပေသည်။ ကုန်သွယ်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ရပ်တွင် ပါဝင်သည့်အဆင့်အားလုံးကို လေ့လာဆန်းစစ်မည်ဆိုလျှင် အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရှိရမည်ဖြစ်သည်။
အဆင့် (၁) စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း (သို့) ဝယ်ယူမည့်အလားအလာ
ကုန်သွယ်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ရပ်သည် ဤအဆင့်မှ စတင်အစပျိုးခြင်းဖြစ်သည်။ အလားအလာရှိသည့် ဝယ်ယူမည့်သူတစ်ဦး (ဝယ်ယူရန် စိတ်ဝင်စားသူ) က ရောင်းချသူထံ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့် ဝယ်ယူလိုသူက အောက်ပါအချက်များကို စုံစမ်းမေးမြန်းလေ့ရှိသည်။
၁။ ပစ္စည်းအရည်အသွေး ၊ အရွယ်အစား ၊ ပုံသဏ္ဍန် ၊ ထုတ်ပိုးမှုစသည်
၃။ ပစ္စည်းပေးပို့နိုင်မည့် အချိန်နှင့်နေရာ
၄။ ဈေးနှုန်းနှင့် ငွေပေးချေမှုသတ်မှတ်ချက် ၊ အကြွေးဆိုင်းငံံ့ကာလ ၊ လျှော့ဈေးစသည်
၅။ နမူနာ ၊ ဈေးနှုန်းစာရင်း ၊ ကတ်တလောက်စသည် စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများသည် နှုတ်အားဖြင့်သော်လည်းကောင်း (သို့) စာရေးသားခြင်းသော်လည်းကောင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုကို ဝယ်ယူမည့် အလားအလား (Prospect) တစ်ခုအဖြစ်လည်း ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။
အဆင့် (၂) ဆိုဈေး (ပစ္စည်းတန်ဖိုးနှုန်းထား ) (သို့) ကမ်းလှမ်းချက်
Quotation (ဆိုဈေး) မှာ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုတစ်ခုကို ပြန်ကြားချက်တစ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်။ ရောင်းချမည့်သူမှ အလားအလာရှိသည့် ဝယ်ယူမည့်သူထံ ၎င်း၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ရောင်းချရန်အကြောင်းကြားသည့် ကမ်းလှမ်းချက်တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ Quotation ကို အမြန်ဆုံး ပေးပို့ပြန်ကြားရမည်ဖြစ်ပြီး စုံစမ်းမေးမြန်းထားသည့်အချက်များ အားလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပြန်ကြားပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြန်ကြားရာတွင် Quotation နှင့်အတူ နမူနာများ ၊ ကတ်တလောက်များ နှင့် လက်ကမ်းကြော်ငြာစသည့် စာရွက်စာတမ်းများကိုပါ တစ်ပါတည်းပေးပို့ရမည်ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် Quotation ကို သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် ဖြည့်စွတ်ပေးပို့လေ့ရှိပြီး အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ ပါဝင်လေ့ရှိသည်။
၁။ ရောင်းချရန် ကမ်းလှမ်းထားသည့် ကုန်ပစ္စည်း၏ အရည်အသွေးနှင့် အရေအတွက်
၂။ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်း၏ ရောင်းဈေးနှုန်းနှင့် လျှော့ဈေး (အကယ်၍ သတ်မှတ်မှုရှိပါက)
၃။ ပစ္စည်းပေးပို့နိုင်မည့်အချိန် ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်မည့်နည်းလမ်းနှင့်နေရာ
၅။ ပေးဆောင်ရမည့် အကောက်ခွန် ၊ သွင်းကုန်ခွန်နှင့် အခြားစည်းကြပ်ခွန်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
၆။ သယ်ယူပို့ဆောင်မည့်နည်းလမ်းများနှင့် ထုတ်ပိုးမှု ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ။
အဆင့် (၃) လက်သင့်ခံခြင်း (သို့) အမှာစာပေးပို့ခြင်း
အမှာစာ (Order) သည် ရောင်းချမည့်သူ၏ ကမ်းလှမ်းမှု (သို့) ဆိုဈေး (Quotation) ကို လက်သင့်ခံခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းရောင်းချမည့်သူများထံမှ ဆိုဈေး (Quotation) များကို လက်ခံရရှိပြီးသည်နှင့် ဝယ်သူအနေဖြင့် သူ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမည့် အကောင်းဆုံးနှင့် အသင့်လျော်ဆုံး Quotation ကို ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ Quotation အများအပြားကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာကာ ၎င်းတို့ထံမှ အသင့်လျော်ဆုံး တစ်ခုကို ရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။ Quotation တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့် ရွေးချယ်ထားသည့် Quotation အဆိုပြုထားသူထံသို့ ၎င်း၏ Quotation ကို လက်ခံကြောင်း နှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ (သို့) စာဖြင့်ဖြစ်စေ အကြောင်းပြန်ပြီး အမှာစာ (ကုန်ပစ္စည်းအမှာစာ )တစ်စောင် ပေးပို့ရမည်ဖြစ်သည်။
ယေဘူယျအားဖြင့် ဝယ်ယူသူများသည် ပုံနှိပ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းအမှာစာပုံစံများကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအမှာစာပုံစံတွင် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ ပါဝင်လေ့ရှိသည်။
၁။ ကုန်ပစ္စည်းအရေအတွက် နှင့် အရည်အသွေး
၂။ ဈေးနှုန်း နှင့် စုစုပေါင်းတန်ဖိုး ငွေပေးချေမည့် သတ်မှတ်ချက်များ
၃။ ပစ္စည်းပေးပို့ရမည့် အချိန်နှင့်နေရာ ၊ ပစ္စည်းပေးပို့မည့်နည်းလမ်း ၊ လိုအပ်သည့် ထုတ်ပိုးမှုအမျိုးအစားစသည်။
အဆင့် (၄) အမှာစာလက်ခံရရှိကြောင်း ပြန်ကြားချက်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေစုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း
အမှာစာလက်ခံရရှိပြီးနောက် ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချသူသည် အဆိုပါ မှာကြားချက်ကို အမှာစာ လက်ခံစာအုပ်တွင် စာရင်းသွင်းပြီး ဝယ်မည့်သူထံသို့ အမှာစာ လက်ခံရရှိကြောင်း ပြန်ကြားချက်ကို အစောတလျင် ပြန်ကြားပေးရမည်ဖြစ်သည်။ အကြွေးစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးရန် တောင်းဆိုလာသည့် ဝယ်သူအသစ်များဆိုပါက ၎င်းတို့၏ ဂုဏ်သတင်းနှင့် အကြွေးပြန်ဆပ်နိုင်ခြေနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်မည့် စုံစမ်းမှုများ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဝယ်ယူသူအသစ် တစ်ဦး၏ အကြွေးဆပ်နိုင်ခြေကို ရရှိနိုင်မည့် အသုံးပြုမြဲ အရင်းအမြစ်များမှာ ကုန်သွယ်မှုအသိုင်းအဝန်းမှ ထောက်ခံချက်များ ၊ ဘဏ်ထောက်ခံချက်များနှင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားသည့် သတင်းအချက်အလက်များ စသည်တို့ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ရောင်းချသူအနေဖြင့် ဝယ်ယူသူ၏ အကြွေးဆပ်နိုင်ခြေနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်နှစ်သက်မှု ရှိပါက အမှာစာအတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကျေနပ်မှုမရှိပါက အမှာစာကို ငြင်းပယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် ပုံမှန်ဝယ်ယူနေကျ ဖောက်သည်ဖြစ်ပါက ၎င်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကြွေးဆပ်နိုင်ခြ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
အဆင့် (၅) အမှာစာများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်း
ရောင်းချသူအနေဖြင့် ဝယ်ယူမည့်သူထံသို့ အမှာစာ လက်ခံရရှိကြောင်း အသိပေးပြန်ကြားပြီးနောက် အမှာစာကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အချိန်အတန်ငယ်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ အမှာစာတစ်စောင်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးရာတွင် အောက်ပါအဆင့်များ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
၁။ သိုလှောင်ရုံမန်နေဂျာထံ အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း
၂။ ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်ပိုးခြင်းနှင့် ပေးပို့ခြင်း
၄။ ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်မှုအတွက် စီစဉ်ခြင်းစသည်။
အဆင့် (၆) ငွေတောင်းခံလွှာပေးပို့ခြင်း
ငွေတောင်းခံလွှာ (Invoice) ဆိုသည်မှာ ရောင်းချထားသည့် ကုန်ပစ္စည်းများ အမျိုးအမည် ၊ အရေအတွက်နှင့် ၎င်းတို့အတွက် ကျသင့်တန်ဖိုးစုစုပေါင်းကို ဖော်ပြထားသည့် အထောက်အထားတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချသူမှ ဝယ်ယူသူထံသို့ ကုန်ပစ္စည်း ပေးပို့ပြီးနောက် (သို့) ကုန်ပစ္စည်းများ နှင့်အတူ Invoice ကို ပေးပို့လေ့ရှိသည်။ Invoice မှာ အကြွေးစနစ်ဖြင့် ရောင်းချသည့် ကုန်ပစ္စည်း များအတွက် ကျသင့်ငွေ တောင်းခံလွှာ တစ်စောင်ဖြစ်ပြီး အများအားဖြင့် ပုံနှိပ်ပုံစံများဖြစ်ကာ ကုန်ပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေး ၊ အရေအတွက်စသည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ဖော်ပြထားသည်။
အဆင့် (၇) မကျေနပ်ချက်များနှင့် ၎င်းတို့အပေါ်ညှိနှိုင်းချက်များ
ပေးပို့လာသည့် ကုန်ပစ္စည်း များကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် ဝယ်ယူသူအနေဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းများကို အမှာစာနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီး အကယ်၍ ကွာဟချက်တစ်စုံတစ်ရာတွေ့ရှိပါက အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရောင်းချသူထံ အသိပေးအကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ အကြောင်းကြားချက် (မကျေနပ်ချက်) များကို ယေဘူယျအားဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းကိစ္စများကြောင့် ဆောင်ရွက်ကြလေ့ရှိသည်။
၁။ အပြစ်အနာအဆာရှိ ချွတ်ယွင်းကုန်ပစ္စည်းများ ပေးပို့ခြင်း
၃။ အပြစ်အနာအဆာရှိသော ထုတ်ပိုးမှုဖြစ်ခြင်း
၅။ တွက်ချက်မှုတွင် အမှားအယွင်းရှိခြင်း
၆။ ကုန်ပစ္စည်းအရေအတွက် ပိုလျံခြင်း (သို့) လျော့နည်းနေခြင်း
၇။ ပေးပို့ကုန်ပစ္စည်းများ ထိခိုက်ပျက်စီးနေခြင်း
အဆိုပါ မကျေနပ်ချက်များကို အေးချမ်းစွာ ညှိနှိုင်းခြင်း (သို့) ကျသင့်ငွေပမာဏ အလျော့အတင်း ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်လေ့ရှိသည်။
အဆင့် (၈) ပေးချေငွေ (သို့) ရောင်းရငွေကောက်ခံခြင်း
ဤအဆင့်သည် ကုန်သွယ်မှုဖြစ်စဉ်တွင် နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည်။ လက်ငင်းငွေချေစနစ်ဖြင့် ရောင်းချသည့်အခါ ရောင်းချသည့် ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် ကျသင့်ငွေပမာဏကို ချက်ချင်းကောက်ခံသည်။ အကြွေး (ဆိုင်းငံ့) စနစ်ဖြင့် ရောင်းချသည့်အခါ ရောင်းချသည့် ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် ကျသင့်သည့် ငွေပမာဏကို ဖော်ပြထားသည့် (သတ်မှတ်ကာလတစ်ရပ်အတွင်း ပေးချေရမည့်) ငွေစာရင်းရှင်းတမ်း တစ်စောင်ကို ရောင်းချသူမှ ဝယ်ယူသူထံ ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် ပစ္စည်းဝယ်ယူသူမှ အကြွေးပေးဆပ်ရန် ချက်လက်မှတ် (သို့) ငွေပေးမိန့်ကို ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။
#SuperLight #Logistics #Knowledge #Trade_Transaction